I-Ketones yesifo sikashukela > Izinkinga zesifo sikashukela
Izinkinga zesifo sikashukela: i-acetone emchameni
Uma ama-ketones kushukela akhiqizwa ngobuningi obukhulu, kusho ukuthi umzimba awunayo i-insulin. Ukuhlolwa kwe-ketone ejwayelekile kubhekwa njengengxenye esemqoka yokuphathwa kwesifo sikashukela, ngoba kusiza ukuvimbela inkinga eyingozi - i-ketoacidosis, okungukuthi, isimo lapho umuntu onesifo sikashukela angafa.
KUBALULEKILE UKWAZI! Ngisho noshukela osethukile angalapheka ekhaya, ngaphandle kokuhlinzwa noma ezibhedlela. Vele ufunde lokho uMarina Vladimirovna akushoyo. funda isincomo.
Ama-ketones yizakhi ezihlanganisiwe ezikhiqizwa isibindi abese engena egazini. Ziqukethe i-acetone, β-hydroxybutyric ne-acetoacetic acid. Odokotela ababheki amanani ezinkomba ngokwehlukile, kepha basebenzise umqondo ojwayelekile we- “acetone”. Imvamisa, la makhompiyutha adilizwa ngokushesha futhi akhishwa umoya ogcwele, imfihlo yezithukuthuku kanye nomchamo, ngakho-ke, awatholakali ekuhlaziyeni kwabantu abaphilile. Ukuvela kwama-ketones ngokweqile kuwuphawu olubalulekile lokuxilonga lwe-carbohydrate engasebenzi kahle kanye nokudla kwamafutha, okuhambisana nokudakwa komzimba.
Ushukela uncishiswa ngaso leso sikhathi! Isifo sikashukela ngokuhamba kwesikhathi singasiholela esixukwini sonke sezifo, njengezinkinga zokubuka, izimo zesikhumba nezinwele, izilonda, i-gangrene kanye namaqhubu omdlavuza! Abantu bafundisa okuhlangenwe nakho okubabayo ukuguqula amazinga abo kashukela abejwayelekile. funda uqhubeke.
I-acetone (imizimba ye-ketone) kumchamo iyimbangela yokubonakala. Amanani we-Urine Acetone
Le nkinga ingenzeka ngezikhathi zokushisa, ngemuva kokuhlinzwa, esimeni sokuphazamiseka kwe-metabolic, okungaba ukubonakaliswa kwesifo esinjengesifo sikashukela. Le nto akufanele ihlale ibangelwa yizinkinga zepancreas, kepha ukubonakaliswa kwayo kungenzeka lapho isiguli sinenkinga yokudla kwe-carbohydrate metabolism esibindini. Kulesi simo, kufika ekugcwaliseni umzimba ngamafutha, futhi i-acetone yakheka njengomkhiqizo. Uma kuvela nesifo sikashukela esikhona, kubonisa ukwelashwa okunganele, okudingeka wenze okuthile ngakho. I-urine acetone ingaba yinto ehambisanayo ne-thyroid hyperactivity.
Izinga elijwayelekile kufanele libe ngu-20 µmol.
Kungani ama-ketones egazini nomchamo enyuka kushukela?
Ukuhlinzekwa okuncane koshukela esibindini kungumthombo oyinhloko wamandla wezitho nezicubu. Ngokubulawa yindlala isikhathi eside, izinga le-glucose liyancipha, futhi ukukhiqizwa kwe-insulin, i-hormone elawula umsoco we-carbohydrate emzimbeni, iyama. Ukuntuleka kweglucose kuphoqa umzimba ukuba usebenzise izinqolobane ezinamafutha njenge “petrol”. Ukuqhekeka kwamafutha kuholela ekwakhekeni ngokweqile kwemikhiqizo ngemikhiqizo - ama-ketones. Kumuntu ongenaso isifo sikashukela, ukukhiqizwa kwe-ketone kuyinto evamile yokuzivumelanisa nomzimba nendlala.
Ama-ketones aphakanyisiwe abangela ubuthakathaka emzimbeni.
Esikhathini sikashukela i-mellitus ngenxa yokuntuleka kwe-insulin, amangqamuzana awasebenzisi i-glucose ukubuyisa amandla. Umzimba uphendula enkingeni yamanje, kanye nangesikhathi sokuzila - ubuyisela amandla ngenxa yamafutha futhi ukhiqiza ama-ketones ngokweqile. I-insulin kuphela engalungisa lesi simo. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi umuntu onesifo sikashukela alandele ukwelashwa kwe-insulin kunconywe udokotela futhi alawule izinga le-acetone. Ukwanda kokuxineka kwemizimba ye-ketone kuhambisana nokoma okukhulu, ubuthakathaka, ukukhathala okungapheli, ukuphefumula kanye nomcanuzelelwa.
I-ketoacidosis nezimpawu zayo
I-Ketoacidosis inkinga enkulu yesifo sikashukela eyenzeka lapho inani elikhulu lemizimba ye-ketone liqongelela emzimbeni ngenxa yokushoda kwe-insulin.
Kulesi simo, ama-ketones akakhishwa emzimbeni, kepha ajikeleze egazini, eguqula i-acidity yawo bese enika ubuthi emzimbeni kancane kancane. Imvamisa, kuba khona kulabo abangasilawuli lesi sifo. Imijovo elahlekile, ukwelashwa kwe-insulin okunganele, ukwephulwa kokudla okune-carb ephansi, njll. Kungakhuthaza i-ketoacidosis. Uma izimbangela zokuthuthuka kwe-ketoocytosis zingamiswa ngesikhathi, kuba nesifo sikashukela esiba khona. I-ambulensi kufanele ibizwe ngokushesha uma kubonakaliswa izimpawu ezilandelayo:
ukwenqatshwa kokudla noketshezi ngumzimba,
ukweqile ushukela, okungaphenduli emizameni ezimele yokunciphisa,
Izinga eliphakeme lama-ketones liyakhuphuka,
iphunga lezithelo elivela emlonyeni
Ama-ketones ngesikhathi sokukhulelwa
Esikhathini sikashukela, umama okhulelwe kufanele azi ukuthi imithamo ye-insulin ingahluka kuleyo ngaphambi kokukhulelwa. Lokhu kungenxa yokwanda kwesisindo somzimba nama-hormone avimbela ukuncishiswa kwe-glucose egazini. Imizimba ye-ketone ethe xaxa iyasuswa, inqunywe isikhathi esithile sokukhulelwa, ngethamo le-insulin. Ngakho-ke, kubalulekile ukubheka ngokucophelela izinga labo, ngoba noma ukwanda okuncane kungasho ukuthi sekuyisikhathi sokubukeza umthamo we-insulin. Isikhathi eside sokukhulelwa, sikhulu isidingo se-insulin. Ngakho-ke, ukukhulelwa onesifo sikashukela kufanele kube ngaphansi kokuqondisa kwe-gynecologist kanye ne-endocrinologist.
Ama-ketones omchamo wengane akhona ngenxa yezizathu ezahlukahlukene, esinye sazo isifo sikashukela. Uma ingane isivele itholakale nesifo sikashukela, abazali kufanele bazi izimpawu zokuqala zokuntuleka kwe-insulin futhi baphendule ngokushesha. Izingane nentsha enesifo sikashukela kudingeka ihlole ama-ketones ngokuhlelekile, ikakhulukazi ngokwanda kwesifo esingelapheki, ngesikhathi somkhuhlane noma isifo esithathelwanayo, futhi ezimweni ezicindezelayo (izivivinyo, imiqhudelwano, uhambo, njll.). Ukuqoqwa kwama-ketones ngaphezulu kwokwejwayelekile kwesinye isikhathi kutholakala ezinganeni ezisanda kuzalwa, ngoba kukhona ukwehla kwesikhashana kwamazinga kashukela.
Ungabona kanjani ukuba khona kwama-ketones?
Ngesifo sikashukela, kubalulekile ukulalela ngokucophelela isimo sakho futhi, uphawu lokuqala lokugula, ulinganise izinga lama-ketones.
Ukwehla kwezempilo (ukoma okwandisiwe, ukuchama kaningi, ikhanda, ukwehla kwesifiso sokudla, njll.) Kusikisela ukuthi kungenzeka ukuthi ukunyuswa kwe-acetone kwandiswe. Ungathola ngezindlela eziningi:
Umugqa wokuhlola usetshenziselwa ukunquma izinga lama-ketones.
Ngomchamo. Ekhaya, kusetshenziswa imichilo ekhethekile yokuhlola. Ukuqondisisa kunqunywa ngokuqhathanisa umbala we-strip nesilinganiso sombala. Isidumbu sakhe:
Imichilo yokuhlola ayikhombisi ukuthi hlobo luni lwama-ketones aphakanyisiwe (kubaluleke kakhulu ukwazi ukwanda kwama-b-ketones),
imizimba ye-ketone ivela umchamo amahora angama-2-3 ngemuva kokuba yakhiwe egazini.
Ngegazi. Ukusetshenziswa kwemichilo ekhethekile ye-Frechester Optimum test ekhombisa izinga lama-b-ketones. Ukuhlolwa kusiza futhi ukulawula amazinga kashukela.
Uma ingekho imichilo yokuhlola, engeza i-ammonia kumchamo. Umbala obomvu ukhombisa ubukhona be-acetone.
Itafula lokuhlushwa kwe-urine ketone:
Imizimba ye-urone ketone nesifo sikashukela
I-acetone ephakeme kukashukela ingaba isimo esisongela impilo kubo bobabili uhlobo 1 nesifo sikashukela 2. Ukushoda kwe-insulin akuhlotshaniswa kuphela ne-carbohydrate metabolism, kodwa futhi nokugaya amafutha. Ngenxa yalokhu, kanye nokwanda kashukela wegazi, kwenzeka ukwanda kwemizimba ye-ketone. Okuqukethwe kwe-acetone okwandisiwe kuboniswa iphunga lokuphefumula komoya wesiguli. Uma lesi simo sesiguli singelashwa, simsongela ngesimo sokungazi. Amazinga aphezulu adinga isinqumo esisheshayo nokwamukelwa kweziguli ewadini yesibhedlela.
Ukwanda kwezinga le-acetone kwenzeka nge-mellitus engalingani emzimbeni, ikakhulukazi uhlobo 1, lapho ushukela wegazi udlula i-15 mmol / L. Lesi simo sidinga ukunakekelwa okuphuthumayo kwezokwelapha, kungcono kakhulu emtholampilo wesifo sikashukela. Kulokhu, kuyadingeka ukuthi kuhlolwe isimo sempilo esejwayelekile futhi unikeze ukwelashwa okufanele, noma udlulisele isiguli esibhedlela.
Ukunaka! Inani eliphansi le-acetone kumchamo lingahle libangelwe yindlala isikhathi eside noma ukugabha.
Izimpawu ezihambisanayo zamazinga aphezulu we-uretone we-uretone
Izinga elikhulayo lezidumbu ze-ketone lihambisana nezinye izimpawu ezifana, ezifana:
iphunga le-acetone emphefumulweni,
Ukwelashwa. Izindlela zokuvimbela isifo sikashukela sohlobo 1 nohlobo 2
Isisekelo sokwelashwa ukunciphisa ushukela wegazi kushukela (kungakhathalekile uhlobo) nokuqina kwalo.
Ukuvimbela ukubheka njalo i-acetone yomchamo noshukela wegazi. Lezi zivivinyo zingenziwa ekhaya kusetshenziswa i-glucometer (isilinganiso sikashukela wegazi) nemichilo ekhethekile yokuhlola, ngemuva kokungena umchamo, ukubala nokukhombisa uma konke kuhamba kahle.
I-acetone kanye nokunye ukuphazamiseka
Isifo sikashukela mellitus. Kulesi sifo, iphunga le-acetone livame ukuba khona ekuphefumuleni, ikakhulukazi ngohlobo lwesifo sikashukela. Umzimba, ngaphandle kokukhiqiza i-insulin, ushisa amaprotheni namafutha, okuphumela ekukhiqizweni kwe-acetone, ebeka engcupheni yomzimba futhi ingene umchamo, egazini kanye nasezweni. Kuyinto evamile ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2, lapho kune-insulin eyanele emzimbeni.
I-Thyrotooticosis. Isifo se-thyroid sehlukaniswe ngamaqembu ama-2. Zihlukaniswa ngokuya ngamazinga wamahomoni. Ngokusetshenziswa ngokushesha kwamafutha namaprotheni, kuza ekukhiqizeni i-acetone. Ukuba khona kwalo kanye nezinga kunganqunywa kusetshenziswa i-urinalysis. Ukwanda kokuqukethwe kwemizimba ye-ketone kuwuphawu lokuthi isibindi siveza inani ngokweqile lezinto ezi-3: ama-2 metabolic acid (beta-butyric acid ne acetoacetate) ne-acetone. Isibonakaliso sokuqala siyiphunga elibonisa umchamo nokuphefumula. Ngaphezu kwalokho, ezinye izimpawu zikhona: ukwethuka, i-tachycardia, ukuncipha kwesisindo ngokudla okujwayelekile. I-Thyrotooticosis iphathwa ngezidakamizwa ezivimbela umsebenzi we-thyroid. Kungcono ukwenza ukuhlolwa kwe-ultrasound ngaphandle kokuthola ukuba khona kwezifo ezinkulu.
Isibindi. Lapho ukwehluleka kumetabolism kufika ekwephulekeni kokufakwa kwezakhi zomzimba. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi uma ukudla okuvinjelwe kuvinjelwe ekudleni kwabo amavithamini kanye namaminerali. Isibindi, esithola kuphela amafutha namaprotheni, sinzima kunazo zonke ukubekezelela ukudla okungenama-carbohydrate. Leli qiniso liholela ekuqhekekeni okwandayo kwamafutha namaprotheni, athinta isisindo somzimba - umuntu ulahlekelwa ngokushesha isisindo. Kodwa, ngenxa yalokhu, ukwanda kwenani lamakhompiyutha e-ketone futhi, ngenxa yalokho, i-acetone. Njengomphumela wokudla njalo, kufikelwa engxenyeni engapheli yesifo se-metabolic, ukwanda kwezifo kanye nokuvela kwezinkinga ezintsha.
Izinso zivame ukuhlushwa ukungondleki kahle emiseleni yezinso. Kulokhu, kukhona ukwephulwa kwamanzi nosawoti, amaprotheni kanye ne-lipid metabolism. Ngokuhambisana nalokhu, i-metabolism yamafutha iyaphazamiseka, okuholela ekwandeni kwezinga lemizimba ye-ketone. Ngaphezu kwe-edema ne-hypertension, iphunga le-acetone libonakala emphefumulweni. Uma kungekho zinyathelo ezithathiwe, kungahle kumiswe ngokuphelele umsebenzi wezinso.
Ukuba khona kwe-acetone emchameni kusho ukugula okungathi sína. Ukuvakatjhela kudorhodera kungaba yinto enqumayo. Isibonelo, ngesifo sikashukela, ukwelashwa okufika ngesikhathi kungavimba ukwenzeka kwezinkinga ezinkulu. Ezinganeni ezincane, ubuthi bomzimba buholela ekuphepheni komzimba, okubangela ukuphazamiseka kwe-metabolic. Kulesi simo, ukuba khona kwezidumbu ze-ketone kubonakaliswa yi-lethargy kanye ne-"acetone" yokuphefumula.
Ama-ketones womchamo anganqunywa kanjani?
Khomba ama-Ketones ngomchamo kungenzeka elabhorethri nasekhaya. Ukuze wenze lokhu, umucu okhethekile ofakwe into ye-alkaline ne-sodium nitroprusside ubekwa umchamo umzuzu 1 (utholakala emakhemisi). Uma kunelinye izinga le-ketones kumchamo, umucu ushintsha umbala usuka kokumhlophe uye obomvu ngokubomvu. Ukuhlolwa kokuphendula kwenziwa ngezinga lemibala - "okungakhi", "okuncane", "okumaphakathi" nokuqukethwe okubalulekile "kwama-ketones. Ukuhlolwa kulula ukuqhutshwa futhi kungenziwa inombolo engenamkhawulo yezikhathi.
Ngemiphumela elungile necacile, udinga ukucubungula igaziokungenziwa futhi elabhorethri nasekhaya. Ngaphezu kwalokho, indlela esabela ngayo emishinini yokuhlola yenzeka ngomchamo we-acetoacetate, futhi okuqukethwe kwe-beta-hydroxybutyric acid kumchamo akukwazi ukunqunywa, ngakho-ke, akufanelekile ekuhlolweni kokusebenza ngempumelelo kokwelashwa kwe-ketoacidosis yesifo sikashukela.
Imiphumela ziyahunyushwa kanjena: ngokujwayelekile, izinga lama-ketones egazini kufanele libe ngaphansi kuka-0.6 mmol / l, izinga le-0.6-1.5 mmol / l libonisa ukuthi kungenzeka ukuthi isifo sikashukela sikashukela, kanye> 1.5 mmol / l - ingozi enkulu yeketoacidosis noma i-ketoacidosis esele ikhona.
Ukuqhathanisa nokuhambelana kwegazi kanye namazinga we-urone ketone
Izinga le-ketone yegazi (mmol / L)
Izinga le-urone ketone
“Okubi” noma “imikhondo yonyawo”
“Imidwebo yonyawo” noma “encane”
"Kancane" noma "kubalulekile"
Kubalulekile ukwazi ngemiphumela emibi nenhle yamanga yokuzimisela kwe-ketonuria.
Umphumela oqondile wamanga (ama-ketones kumchamo anqunywa, kepha akukho bungozi bokukhula nesifo sikashukela sikashukela) ngenxa:
Ukuthatha umuthi othize (ngokwesibonelo: Captopril, valproate),
I-acetone ingajikeleza egazini amahora amaningi, ngisho nangemva kokuphathwa komthamo odingekayo we-insulin. Kulokhu, ama-ketones amasha awakhiwa futhi awatholakali egazini.
Imiphumela emibi yamanga (ama-ketones umchamo awatholakali, kepha akhona) ngenxa:
Ukwemukelwa kwenani elikhulu le-Vitamin C (ascorbic acid) noma i-salicylic acid (etholakala kuma-painkiller amaningi anjenge-aspirin),
Isembozo semisebe yemivimbo sivuleke isikhathi eside,
Impilo yeshalofu yemichilo yokuhlola isidlulile.
Ngakho-ke, uma ama-ketones etholwa umchamo wasekuseni futhi izinga likashukela wegazi liphansi, lokhu "Ama-ketones alambile". Ungahle ubhekane nobuthakathaka obujwayelekile kanye nesicanucanu, lapho kuvela izimpawu ezinjalo, udinga ukudla ukudla okuqukethe i-carbohydrate, kulandelwa ukwethulwa komthamo odingekayo we-insulin. Futhi, qiniseka ukunquma izinga le-glucose ebusuku ngokulandelayo ukuze ukhiphe amathuba okuba ne-hypoglycemia yangebusuku. I-glucose ephezulu yomchamo ikhombisa ukuthi i-glucose yegazi yayiphezulu ebusuku, yize yayincane ekuseni.
Uma izinga lama-ketones kumchamo (kanye / noma igazi) liphezulu futhi izinga likashukela wegazi lidlula i-15-20 mmol / l, lokhu kukhombisa ukuntuleka kwe-insulin. Okubaluleke kakhulu ukuphathwa komthamo owengeziwe we-insulin. Ngakho-ke:
Faka i-insulin esebenza ngo-0.1 U / kg esebenza ngokufushane (mhlawumbe i-Novorapid noma iHumalog),
Thola izinga likashukela wegazi ngemuva kwamahora angu-1-2,
Faka enye i-0,1 U / kg yesisindo uma izinga likashukela wegazi lingakanciphile,
Musa ukujova i-insulin esebenza ngokufishane kaningi kunawo wonke amahora amathathu ukugwema ukubambezeleka kwe-hypoglycemia,
Nquma izinga lama-ketones egazini ihora ngemuva kokufakwa komthamo owengeziwe we-insulin - kufanele unciphe,
Sebenzisa amanzi amaningi (amanzi)
Uma izinga lamakhemikhali egazi liyi-3 mmol / l noma ngaphezulu, bona udokotela ngokushesha!
Uyini umehluko phakathi kwesifo sikashukela se-ketoacidosis ne-acetone kumchamo
Izidumbu zeKetone (ama-ketones) ziyizinto eziphilayo ezihlanganiswa esibindini ngesikhathi “sokudla kwendlala” (ukuntuleka kwama-carbohydrate) kusuka emafutheni namaprotheni. Umzimba ungena esimweni se-ketosis. Isikhombi esibonakala kalula salesi simo yi-acetone yomchamo. Ama-ketones womchamo owengeziwe abizwa nge- ketonuria.
I-Ketosis yisimo esivamile ngokomzimba lapho ukuntuleka kwamandla emzimbeni kumbozwe khona ngama-ketones. Umzimba wabantu basenyakatho (i-Chukchi ne-Eskimos) uhlelwe ngofuzo kumetabolism enjalo.
Imizimba yeKetone emzimbeni ihlala ikhona ngamanani amancane. Imvamisa ukuhlaziya kukhombisa ukungabikho kwabo. Ukuba khona kwe-acetone kungaba ngumphumela we:
Ukudla okuphansi kwe-carb
Isifo sikashukela esingakhokhelwe.
Ebantwini abaphilile, i-acetone kumchamo izonyamalala ngokwayo ngemuva kokuqeda imbangela (ukushisa ngokweqile, indlala, ukomisa). Kwezinye izimo, kunconywa ukudla okulinganiselayo kanye nokusetshenziswa kwama-sorbents.
Isifo sikashukela esiqediwe ekhaya. Sekuyinyanga selokhu ngikhohliwe ngokuxhuma ushukela nokuthatha i-insulin. Hhawu, indlela engangihlala ngihlupheka ngayo, ngiphelelwa amandla njalo, izingcingo eziphuthumayo. Kukangaki lapho ngihambile kuma-endocrinologists, kepha basho into eyodwa lapho - "Thatha i-insulin." Futhi manje sekudlule amasonto ayi-5, njengoba izinga likashukela wegazi lijwayelekile, hhayi umjovo owodwa we-insulin futhi konke kubonga kule ndatshana. Wonke umuntu onesifo sikashukela kumele afunde!
Uma i-acetone itholwa umchamo izinsuku eziningana zilandelana, lokhu kubonisa ukugula okungathi sína. Ama-ketones azonyamalala ngemuva kokulashwa kwezifo ezingaphansi.
I-acetone emchameni wabesifazane abakhulelwe ibonisa i-toxicosis enzima.
Ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-12 ubudala, ukushintshashintsha kwe-acetone emchini kungabukwa kaningi ngenxa yokwanda kwamanyikwe. Izindleko eziphakeme zamandla ngalesi sikhathi kanye nokungapheleli kwezinqubo ze-metabolic kuphoqa umzimba ukuba ufune usizo ezimalini zangaphakathi.
Izinsizakusebenza ze-glucose emzimbeni wengane zisheshe ziphelelwe yizingcindezi ezingokomzwelo, ukuzikhandla okukhulu ngokomzimba, kanye nokushisa okuphezulu. Ukuphuza kufanele kutholakale njalo ezinganeni ukuqeda ubuthi (kulokhu, ama-ketones). Isidingo sakhe samaswidi kumele saneliswe.
Ebantwini abaphilile, ukushintshela ekudleni okune-carb ephansi, i-acetone yomchamo ingabonakala ngesikhathi sokuzivumelanisa (ngesinye isikhathi ingahudula inyanga). Ngemuva kwalokho, izindlela zokuzithiba zokulawula ziyavulwa futhi ama-ketones cishe asetshenziswa ngokuphelele yimisipha nobuchopho.
Ukukhula kwama-ketones umchamo wabantu abanciphisa umthamo wabo wama-carbohydrate okwehlisa isisindo kuwuphawu oluhle lokushisa amafutha angaphansi kwe-subcutaneous.
Isiguli sikashukela singalandela ukudla okune-carb ephansi elawulwa ngokuqinile ushukela nama-ketones. Ngasikhathi sinye, amazinga aphezulu kashukela kanye nama-ketones awemukeleki.
I-kedosis engalawulwa ingaholela ekwandeni okukhulu kwegazi lemizimba ye-ketone futhi ibangele ukuguquka kwe-pH ohlangothini lwe-acid. I- "acidization" yomzimba igcwele ukungasebenzi kahle emsebenzini wayo. Kunesimo se-pathological - ketoacidosis.
Nge-insulin enganele, umzimba uqala ukuzwa indlala, ngisho nangokweqile kwe-glucose engena emzimbeni. Izidumbu zeKetone ziqala ukukhiqizwa, ukumuncwa kwazo okunzima ngenxa yezinga le-glucose ephezulu. Ngokuphikisana nesizinda sokuphelelwa ngamandla, ukugcwala kwama-ketones kuyakhula, umzimba "uqinisa" - iketoacidosis yeswekile.
Esigulini esinesifo sikashukela, i-acetone yegazi yisixwayiso esinamandla mayelana nokukhulisa i-ketoacidosis ngemuva kwesizinda sikashukela esibolile.
Iyini ingozi yesifo sikashukela sikashukela kushukela
Lesi sifo siba imperceptibly, izinsuku ezimbalwa zingadlula ngaphambi kokuba singene esigabeni esibi. Ngalesi sikhathi, ngokuntuleka kwe-insulin, ukugcwala koshukela egazini kuyanda, amanzi emzimbeni, umzamo wokuzenzela ukuntuleka kwamandla ngenxa yokuqhekeka kwamafutha kuholela ekwakhekeni kwama-ketones.
Umthwalo osezinso uyakhuphuka, usawoti uyahlanzwa uphume emzimbeni, umzimba “uvumbuluka”. Kusuka kumathambo i-calcium ne-magnesium kuhlanjululwe ngokuqinile. Ukunikezwa kwegazi ezicutshini zenhliziyo nengqondo kuyahlupheka. Indlala yegilo iyathinteka.
Umzimba uzama ukukhipha ama-ketones ngokweqile ngosizo lwezinqubo ze-excretion - amaphaphu, izinso nesikhumba. Ukuphefumula kwesiguli, umchamo wakhe nesikhumba sakhe kunephunga elimnandi "elimnandi".
Ukuthuthukisa i-ketoocytosis kusifo sikashukela kuhambisana:
Isigaba sokuqeda - i-edema yamakhemikhali, okuzoholela ekuboshweni kokuphefumula, ukuboshwa kwenhliziyo, ukufa.
Ngesikhathi sokugula, imfiva ephezulu inomthelela ekubhujisweni kwe-insulin. Kulokhu, isimo se-ketoacidosis sikhula ngokushesha, emahoreni ambalwa.
I-Hyperglycemia + ukuhlushwa okukhulu kwama-ketones emchameni = isifo sikashukela se-ketoacidosis.
Ukuthuthukiswa kwe-ketoacidosis yesifo sikashukela kuhlotshaniswa nokuntuleka kwe-insulin emzimbeni. Endabeni yesifo sikashukela esincike ku-insulin, lokhu kungabangelwa yizizathu ezilandelayo:
Imithamo ye-insulin enganele. Lokhu kuvame ukuthi kube "neziguli" ezihlola isisindo sazo.
Shintsha ezimweni zomjovo: Ukushintsha kwesayithi lomjovo, ukweqa umjovo.
Isidingo esanda kakhulu somthamo owengeziwe we-insulin obangelwa yisimo esikhethekile (isifo esithathelwanayo, usizi, ukukhulelwa, unhlangothi, ukushaya kwenhliziyo, ukucindezela).
Ngo-sikashukela ongancikile i-insulin, ukuthuthukiswa kwalesi sifo kungenzeka uma kwenzeka kushoda i-insulin uqobo:
Kwisifo sikashukela "ngesipiliyoni." Kulokhu, ukuba khona njalo kwama-ketones kumchamo kukhombisa isidingo sokushintsha i-insulin engaphandle.
Ngesimo esikhethekile sesifo sikashukela - izifo, unhlangothi, ukushaya kwenhliziyo, usizi, ukucindezela.
Ngesikhathi sokugula, akwamukeleki ukweqa imijovo ye-insulin noma ukwehlisa umthamo wayo. Lapho kungekho khona ukuthambekela, kunconywa ukudla ama-jusi (cabanga ama-carbohydrate afakwe amayunithi wesinkwa).
I-"Hungry" ketoacidosis ku-mellitus yesifo sikashukela ingaba khona nge-hypoglycemia. Kulokhu, izindlela ezisetshenziselwa ukulwa noshukela ophansi zizosiza.
Isiguli sikashukela esiphuza utshwala sinobungozi bokuthola i-ketoacidosis “yotshwala”. Utshwala bukhuthaza ukukhula kwama-ketones futhi ngasikhathi sinye sinciphise amazinga kashukela.
Izimpawu ze-ketoacidosis yesifo sikashukela
Ngokungafani ne-hypoglycemia, le nkinga yesifo sikashukela iba kancane kancane. Ezimpawu zokuqala ezibonisa i-hyperglycemia:
nxusa ukuchama kaningi,
kunezelwa izimpawu ezibonisa ubuthi be-ketone:
Ukuba khona kwama-ketones emchameni.
Kulesi sigaba sokuthuthukiswa kwalesi sifo, kungenzeka ukuyeka i-ketoacidosis ku-mellitus yesifo sikashukela ngokwayo.
Uma kutholakala izimpawu sekwephuzile:
ukuphikisana nokudla, ikakhulukazi inyama,
ukuphefumula okusheshayo okunomsindo
ukuphuthuma esibhedlela kuyadingeka.
Ukuxilongwa kwe-ketoacidosis yesifo sikashukela
Ukuxilongwa kwe-ketoacidosis yesifo sikashukela kwenziwa phambi kwezinto ezimbili:
Ushukela omkhulu wegazi.
Ubukhona bezidumbu ze-ketone emchameni.
Ezingeni likashukela> 13 mmol / L, kuyadingeka njalo (njalo amahora ama-4) ukuhlaziya umchamo wama-ketones. Uma i-acetone itholakala, kufanele usebenzise izindlela zosizo lokuqala.
Ekhaya, kulula ukuthola ukuthi i-acetone isebenzisa imichilo ekhethekile yokuhlola. Benza ukuthi kwenzeke kufanelekile (ngesinye isikhathi ngobuningi) ukuba khona kwama-ketones:
Uma ukuhlolwa kukhombisa i-ketonuria elinganiselayo, kungakuhle ukuthi ubonane nodokotela. Nge-ketonuria ephezulu, ukuboniswa esibhedlela okuphuthumayo kubonisiwe.
Iziguli ezinesifo sikashukela esinezifo ezithinta ukuphefumula / izifo eziphefumula kakhulu kudingeka zinqume ukuba khona kwe-acetone emchameni njalo emahoreni ama-4.
Izinyathelo zokuqala ekwelapheni i-ketoacidosis (ene-ketonuria emnene):
Ukulungiswa komthamo we-insulin.
Isiphuzo se-alkaline engilazini njalo ngesigamu sehora (lokhu kungaba ngamanzi amaminerali afanele noma uhhafu wethisipuni le-soda engilazini yamanzi).
Ngokuncipha kakhulu kweshukela egazini - ujusi wamagilebhisi.
Lapho esibhedlela, lesi sifo sitholakala ngokuhlaziya i-plasma yegazi, ngokusho kwezinkomba ezilandelayo:
IGlucose> 13 mmol / L.
Ama-ketones> 2 mmol / L.
Ukwelashwa kwe-PH: I-Protocol Yodokotela
Ukuze uvimbele ukukhula kwesifo okungathi sína, uma usola i-ketoacidosis yesifo sikashukela, kungakuhle ukubiza iqembu le-ambulensi. Uma ukuxilongwa kuqinisekisiwe, isiguli sifakwa ngokushesha nge-saline emzimbeni futhi sifakwe umjovo we-insulin (amayunithi angama-20) ngokungena emzimbeni.
Ngokuya kobunzima balesi sifo, ukulaliswa esibhedlela kwenziwa emnyangweni wezokwelapha ojwayelekile noma ophikweni olunakekelwa kakhulu. Ukwelashwa kufaka amaphoyinti angama-5 agunyaziwe (umthetho olandelwayo):
Ukubuyiselwa kabusha kokusweleka kwamaminerali.
Ukwelashwa kwezifo okwakhuthaza ukuthuthukiswa kwezinkinga.
Ezimweni ezinobunzima be-ketoacidosis enesifo sikashukela, i-insulin ilawulwa ngokungaziphathi kahle, futhi ukulahlekelwa uketshezi kunxeshezelwa ngokuphuza kakhulu.
Isifo sikashukela se-ketoacidosis insulin therapy
Ukuphathwa kwe-insulin ukuphela kwendlela "yokuguqula" izinqubo ze-pathological ezibangelwa yi-ketoacidosis yesifo sikashukela. Ukwelashwa kwe-insulin kwenziwa ngendlela yokulondolozwa "kwemithamo emincane" engaholeli ku-hypoglycemia.
Ukuphathwa okuqhubekayo kwemithamo emifushane ye-insulin (kuze kube iyunithi ezi-6 ngehora) kumisa inqubo yokuqhekeka kwamafutha (ama-ketones awakhiwa), kunciphisa umthwalo esibindini (asikho isidingo sokuhlanganisa ushukela), futhi kunomthelela ekuqongeleleni kwe-glycogen.
Esilungiselweni sesibhedlela, isiguli sifakwa i-insulin ngokufakwa ngaphakathi ngokufakwa njalo ngesilinganiso se-0,1 U / kg / h sisebenzisa i-infusomat. Ngaphambi kwalokhu, umthamo "wokulayisha" we-insulin "emfushane" (0.15 U / kg / ihora) ulimala kancane kancane emzimbeni.
I-infusomat - iphampu yokufaka (ipompo) yokulawulwa okukhishwa kwemithi.
I-insulin "emfishane" - IZITHUTHUKO ezingama-50,
1 ml wegazi lesiguli,
+ usawoti kuze kufike ku-50 ml wevolumu.
Ngemuva kwamahora ama-3 kuqalile ukwelashwa, kungenzeka ukuthi kukhuphuke kancane ama-ketones umchamo. I-Ketonuria ingaqedwa ngokuphelele ezinsukwini ezi-3 kuphela ngemuva kokujwayelekile kwamazinga kashukela.
I-intravenous insulin therapy lapho kungekho infusomat
Uma i-infusomat ingatholakali, i-insulin ifakwa ngesirinji kancane (ibhonasi) njalo ngehora ukungena komjovo we-dropper. Imithamo ye-insulin "emfushane" yanele ihora. Ingxube yomjovo ilungiswa kusuka ku-insulin ne-saline, kulethe umthamo ophelele ku-2 ml.
Ezigabeni ezinzima ze-ketoacidosis yesifo sikashukela, ukuphazamiseka kokujikeleza kwe-capillary kuyabonakala. Ukuphathwa kwe-insulin ngokweqile noma ngoku-intramuscularly ngalesi sigaba salesi sifo akusizi.
Ukulungiswa komthamo we-insulin
Isiguli sibhekelwe amazinga kashukela ngehora.
Uma ukucindezelwa kweglucose kunganciphi kungakapheli amahora ama-2, umthamo olandelayo we-insulin ukhushulwa amahlandla ama-2 (ukungabikho komzimba).
Ushukela wegazi akufanele wehliswe ngaphezu kwe-4-5 mmol / ihora. Uma ushukela wehla ngokushesha okukhulu, umthamo olandelayo we-insulin ukhanseliwe (uma izinga likashukela selinciphe ngokungaphezu kuka-5 mmol / L) noma amahlandla ama-2 (uma ushukela “sehlile” ngo-4 - 5 mmol / L).
Ngemuva kokufinyelela ku-13-14 mmol / l, umthamo we-insulin uyancishiswa (kuya ku-3 U / h). Uma isiguli singakwazi ukudla ngokwaso, sifakwa nge-glucose (5-10%) ukuvikela i-hypoglycemia.
Ungashintshela kanjani ekuphathweni kwe-insulin esezingeni eliphansi
Lapho isimo sesiguli sithuthuka (ingcindezi iba yinsakavukela, i-glycemia 7.3), baphendukela ekuphathweni kwe-insulin, ekushintsheni i-insulin “emfushane” njalo ngamahora ama-4 (amayunithi ayi-10 - 14) kanye “naphakathi” kabili ngosuku (amayunithi ayi-10 - 12).
Ukujova kokuqala kokufakelwa "kusekelwa" ukufakwa kwe-insulin "emfishane" amahora amabili.
Ukuvuselelwa komzimba ku-ketoacidosis yesifo sikashukela. Ungakuvimbela kanjani ukulayisha ngokweqile kwe-fluid
Umsebenzi oyinhloko ekwelapheni lesi sifo ukubuyisa uketshezi olulahlekelwe ngumzimba okungenani isigamu. Ukuqeda ukomisa kuzobuyisela umsebenzi wezinso, ushukela owedlulele uzothululwa emgodini wokuchama futhi ushukela wegazi uzokwehla.
Ngokubuyiselwa komzimba kabusha, kusetshenziswa isisombululo se-saline noma se-hypotonic (kuya ngezinga le-sodium ku-serum yegazi). Sebenzisa ishedyuli yokuphatha ejwayelekile (ihora 1 - 1 ilitha, 2 no-3 amahora - 500 ml, bese-ke u-240 ml njalo ngehora) bese uhamba kancane (amahora ama-4 okuqala - amalitha ama-2, amahora ayi-8 alandelayo - amalitha ama-2, njalo emahoreni ayi-8 alandelayo - 1 litre).
Umthamo wetshezi olujovwe phakathi nehora ulungiswa ngokuya nge-CVP (ingcindezi ephakathi nendawo). Ingasukela ku-1 litre (ku-CVP ephansi) iye kuma-250 ml.
Ngokuphelelwa ngamandla emzimbeni, umthamo ovumelekile we-fluid olimale ngehora akufanele wedlule umthamo womchamo okhishwe ngaphezu kwe-1 litre.
Ukugcwala ngokweqile kungadala i-pulmonary edema. Emahoreni okuqala ayi-12 ekwelashwa kwalesi sifo, kuvunyelwe ukufaka inani lamamanzi elingadluli ku-10% wesisindo somzimba ngevolumu.
Ngamazinga aphansi kakhulu we-systolic blood pressure kanye ne-CVP, ama-colloids ayalawulwa.
Izingane nentsha zithambekele ku-edema yamakhemikhali. Kubo, umthamo wamanzi owethulwe emahoreni angama-4 okuqala akufanele udlule ku-50 mg / kg. Ngehora lokuqala, akukho ngaphezu kwe-20 ml / kg okusetshenziswayo.
I-Acidosis "i-acidization" yomzimba ngenxa yokushintsha kokulinganisa kwe-acid esehlangothini lwe-asidi ngenxa yokuqongelela ngokweqile kwama-organic acid (kithi, imizimba ye-ketone).
Ukwelashwa kwe-insulin, okucindezela ukukhiqizwa kwama-ketones, kususa imbangela ye-acidosis - "acidization" yomzimba ngemizimba ye-ketone. Izinyathelo ezithathwe ukulwa nokuphelelwa ngamanzi emzimbeni kusheshisa ukuqedwa kwemizimba ye-ketone izinso futhi kufake isandla ekubuyiselweni kwe-acid - base balance.
Kumanani aphansi we-PH (Imisebenzi engathandeki yeNonspecific
Uma usesibhedlela, iziguli ezitholakala zinesifo sikashukela sikashukela zingadinga izindlela zokwelapha ezengeziwe:
Ukwelashwa kwe-oksijini ukwehluleka ukuphefumula.
Ukufakwa kwe-catheter ye-venous ye-dropper.
Ukufakwa kweshubhu esiswini ukukhipha okuqukethwe esiswini (uma isiguli singazi).
Ukufaka i-catheter ebangeni ukuze kuhlolwe umthamo womchamo obunjiwe.
Ukuphathwa kwe-heparin ekuvimbeleni i-thrombosis ezigulini (asebekhulile, osethokomele, ngegazi "eliwugqinsi", ukuthatha izidakamizwa ezilwa nemithi elwa nenhliziyo)
Ukwethulwa kwemithi elwa namagciwane emazingeni okushisa aphakeme omzimba.
I-hever in ketoacidosis yesifo sikashukela ihlala ikhombisa ukutheleleka.
Isifo sikashukela ketoacidosis ezinganeni
Ebuntwaneni, isifo sikashukela sohlobo lokuqala sivame ukutholakala kuphela uma ingane itholakale nesifo sikashukela sikashukela. Ukulawulwa kweshukela ushukela wegazi kuzosiza ukugwema le nkinga ngokuzayo.
Esikhathini sokukhula kobusha, lapho “osemusha” ezama ukuqeda esitokisini umuzwa wokubhikisha futhi elwa nanoma imuphi umzamo wokumlawula ngandlela thile, ingozi yokuthola esibhedlela (okungenani) inkulu. Kungahle kube nomphumela obuhlungu. Kuyadingeka ukukhumbuza ingane ngezici zesifo sikashukela.
Ezinganeni, izimpawu ze-ketoacidosis yesifo sikashukela kanye nokwelashwa kwayo ziyefana nakwabantu abadala. Imithamo yezidakamizwa ezifakiwe ibalwa ngokususelwa emzimbeni. Ababelethi abazokuvikela bazovikela umntanabo engxenyeni enkulu.
Ezinganeni ezinesifo sikashukela sohlobo 2, le ndlela yalesi sifo ayenzeki. Kulesi sikhathi, i-insulin yayo ngokwayo isanele ukuletha umzimba esimweni esibucayi.
Isiguli sibhekwa njengelashwa lapho izinkomba zakhe zenhloso zibuyele kokujwayelekile:
Ngemuva kokuphuma esibhedlela, ushukela kumele ulawulwe. Uma idlula i-14 mmol / L, qhubeka ulawule i-acetone kumchamo. Uma wena ngokwakho ungakwazi ukubhekana ne-ketonuria - ngokushesha thintana nodokotela.
Ku-47, kwatholakala ukuthi nginesifo sikashukela sohlobo 2. Emavikini ambalwa ngithole cishe ama-15 kg. Ukukhathala okuhlala njalo, ukozela, umuzwa wobuthakathaka, umbono waqala ukuhlala phansi.
Lapho ngiba neminyaka engama-55, ngangivele ngizigwaza nge-insulin, yonke into yayimbi kakhulu.Lesi sifo saqhubeka nokukhula, ukubanjwa kokuhlaselwa ngezikhathi ezithile kwaqala, i-ambulensi ingibuyisela ezweni elilandelayo. Sonke isikhathi bengicabanga ukuthi kulokhu kuzoba okokugcina.
Konke kwashintsha lapho indodakazi yami ingivumela ukuba ngifunde i-athikili eyodwa kwi-Intanethi. Awungeke ucabange ukuthi ngimbonga kanjani. Le ndatshana ingisize ngokuphelele ukuqeda ushukela, isifo okusolakala ukuthi singelapheki. Iminyaka eyi-2 yokugcina ngiqale ukuhambisa eminye, entwasahlobo kanye ehlobo ngiya ezweni nsuku zonke, ngikhule utamatisi ngithengise emakethe. Bomalume bami bayamangala ngendlela engihambisana ngayo nayo yonke into, lapho kuvela khona amandla namandla amaningi, abasakholelwa ukuthi ngineminyaka engama-66 ubudala.
Ngubani ofuna ukuphila impilo ende, enamandla futhi akhohlwe ngalesi sifo esibi kuze kube phakade, thatha imizuzu emi-5 ufunde lesi sihloko.
Lapho ukuba khona kwama-ketones emchini akuyona ingozi
Ama-ketones kumchamo wesifo sikashukela kungenzeka ngenxa yokungahambisani nokudla okuphansi kwe-carb. Uma kungafani nalokhu ngemuva kwalokhu, ushukela wegazi lesiguli awukhuphuki ufike ku-13 mmol / l noma ngaphezulu, khona-ke imiphumela enjalo yokuhlola ayisona isizathu sokuyalela ukwelashwa.
Kunconywa ukuthi isiguli sivame kakhulu ukuqapha amazinga kashukela besebenzisa i-glucometer futhi iphathe kahle i-insulin. Uma lezi zincomo zingalandelwa, izinga lama-ketones lingakhuphuka futhi liholele ekuthuthukisweni kwe-ketoacidosis.
Kungani kukhula i-ketoacidosis
Isifo sikashukela sikashukela siwumphumela we-carbohydrate metabolism ephazamisekile. Ama-carbohydrate angena emzimbeni wesiguli awakwazi ukubiliselwa ezisekelweni zewayini ezinoshukela, kanti nokuntuleka kwe-insulin kuholela ekutheni amaseli awakwazi ukudonsa ushukela njengomthombo wamandla. Ngenxa yalokhu, umzimba usebenzisa izinqolobane ezinamafutha bese uwabamba kakhulu. Ngenxa yalokhu, amafutha namaprotheni awakhiqizwanga ngokuphelele ama-acetones, aqongelela egazini, bese kuvela umchamo.
Ama-ketones kumchamo ohlobo lokuqala lwesifo sikashukela avela lapho izinga likashukela egazini likhuphukela ku-13.5-16.7 mmol / L noma lapho i-glucosuria idlula i-3%. Uma kungekho ukwelashwa okufika ngesikhathi, i-ketoacidosis ingavusa ukuthuthuka ketoacidotic coma.
Njengomthetho, i-ketoacidosis ku-mellitus yesifo sikashukela ingumphumela wokuxilongwa okungaziwa noma umphumela wokwelashwa okungafanele:
ukuphathwa kwe-insulin okunganele
ukwenqaba ukuphatha i-insulin,
ngezikhathi ezithile alahlekile imijovo
Ukulawulwa okungajwayelekile kwamazinga kashukela,
ukulungiswa kwamthamo okungalungile kwe-insulin, ngokuya ngezinkomba zemitha,
ukuvela kwesidingo esingeziwe se-insulin ngenxa yokudla inani elikhulu lokudla okunama-carbohydrate noma ukukhula kwesifo esithathelwanayo,
ukuphathwa kwe-insulin eligcinwe ngokungafanele noma liphelelwe yisikhathi,
ukungasebenzi kahle kwephampu ye-insulin noma ipeni le-insulin.
Lezi zimo ezilandelayo zingasiza ekuthuthukisweni kwe-ketoacidosis kushukela lwanoma yiluphi uhlobo:
ukutheleleka kakhulu noma izinqubo zokuvuvukala,
ukuthatha abaphikisi be-insulin: i-glucocorticosteroids, ama-diuretics, izidakamizwa ze-hormone yezocansi,
ukuthatha izidakamizwa ezinciphisa ukuzwela kwezicubu ukungena ku-insulin: ama-antipsychotic, njll,
ukudangala kokulondelwa kwe-insulin ngesikhathi sokubola kwesifo sikashukela sohlobo 2.
Kwesinye isikhathi imbangela yokuthuthuka kwe-ketoacidosis ngamaphutha odokotela:
ukuphathwa ngokungafanele kwe-insulin ngohlobo 2 sikashukela,
uhlobo lwesifo sikashukela esingaziwa kwangaphambili.
Ungakuthola kanjani ukuvela kwama-ketones kumchamo
Ukuthola ama-ketones emchini, izindlela ezilandelayo zingasetshenziswa:
Ukuhlaziywa komchamo elabhorethri - imiphumela inqunywa njengokuthi "+" (+ - ukusabela okuhle okubuthakathaka mayelana nokuba khona kwama-ketones, ++ noma +++ - ukusabela okuhle okubonisa ubukhona bama-ketones umchamo, ++++ - ukusabela okuhle okubonisa ukuba khona kwenani elikhulu lama-ketones kumchamo),
imivimbo yokuhlola - ukuhlolwa kwehliswa emchameni imizuzwana eminingana, bese imiphumela ihunyushwa ngokuqhathanisa umbala emgqeni nasezilinganisweni ezinamathiselwe kwiphakheji.
Ekhaya, lapho kungekho khona imicu yokuhlola, ungathola ukuthi kukhona ama-ketones emchameni usebenzisa i-ammonia. Ukudonsa kwayo kumele kufakwe emchameni. Ukuqina kwayo ngombala obomvu okhanyayo kuzokhombisa ubukhona be-acetone.
Ezimweni eziningi, i-ketoacidosis yeswekile ikhula ngaphezu kwezinsuku eziningana, futhi ngezinye izikhathi amahora angaphezu kwama-24.
Ekuqaleni, isiguli siqala ukukhathazeka ngezimpawu ezibonisa ukwanda koshukela wegazi nokuntuleka kwe-insulin:
ukunciphisa umzimba okungenangqondo,
isikhumba esomile nolwelwesi lwe-mucous.
Uma kungekho ukwelashwa, ukwanda kwe-acidosis kanye nokukhula kwe-ketosis kwenzeka:
ukugabha kanye nenausea
Umoya kaKussmaul (ujule futhi unomsindo).
Ukuqina kwalesi simo kubangela ukuphazamiseka kwesistimu yezinzwa:
i-thoroma ne-ketoacidotic coma.
Ukwelashwa kwe-ketoacidosis kufanele kuqale kusibonakaliso sokuqala sayo, ukuba khona kwayo kuboniswa yimiphumela yokuhlolwa kwegazi nomchamo.
Isiguli esine-ketoacidosis yesifo sikashukela esisesigabeni sokuqala (ngenkathi sigcina ukuqashelwa kanye nokungabikho kwe-conccomitant pathologies) esibhedlela esibhedlela emnyangweni wezokwelapha noma we-endocrinology. Neziguli ezisesimweni esibucayi kakhulu - ophikweni lokunakekelwa olunzulu.
Ukuze wenze uhlelo oluyilo lokwelashwa, umnyango uhlala uqapha izimpawu ezibalulekile.
Izinyathelo ezilandelayo zifakiwe ezinhlelweni zokwelashwa:
Ukuphinda kugcwaliswe ama-electrolyte alahlekile,
ukwelashwa kwezifo okubangele inkambo eyinkimbinkimbi yesifo sikashukela.